FSF milaza "Tsy azo ekena sy tsy ara-drariny" ary hanome vola lahatsoratra momba ny olana ara-dalàna sy ny olana | Avy amin'ny Linux
Nilaza ny FSF fa "tsy azo ekena sy tsy ara-drariny" ary hamatsy vola ny lahatsoratra momba ny olana ara-dalàna sy ny olana
Tsy ela akory izay zarainay eto amin'ny bilaogy ny vaovao «Copilot» izay AI izay mampanantena ny hamonjy fotoana amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny fanoratana kaody mpampiasa miaraka amin'ny soso-kevitr'izy ireo manokana izay mifototra amin'ny andalana amina miliara amina kaody izay natolotry ny mpampiasa ampahibemaso ho an'i GitHub, tamin'ny fampiasana rafi-pitsikilovana artifisialy antsoina hoe Codex avy amin'ny orinasam-pikarohana OpenAI.
Raha i Copilot dia mpamonjy fotoana betsaka ary GitHub dia mamaritra an'i Copilot ho mitovy amin'ny AI amin'ny "fandaharana roa", izay iarahan'ny mpandrindra roa miasa amin'ny solosaina tokana. Ny hevitra dia ny mpamorona iray dia afaka mamorona hevitra vaovao na mahita olana izay mety tsy azon'ny mpandrindra iray hafa, na dia mila asa ora maro aza izany.
Amin'ny fampiharanaNa izany aza, Copilot dia fitaovana fampitaovana mandany fotoana toa azy mampiditra loharanom-bola izay tokony hojeren'ny mpamorona any an-toeran-kafa. Rehefa miditra ao Copilot ny data, manolotra sombin-javatra ilay fitaovana ho azon'izy ireo ampiana amin'ny tsindry bokotra iray. Amin'izay izy ireo dia tsy mila mandany fotoana mitady rakitra API na mitady kaody santionany amin'ny tranonkala toa an'i StackOverflow.
Ny tambajotra neural ao amin'ny GitHub Copilot dia voaofana amin'ny fampiasana angon-drakitra marobe, fehezan-dalàna - andalana an-tapitrisany ampidin'ireo mpampiasa 65 tapitrisa GitHub, sehatra lehibe indrindra manerantany hiarahan'ny mpandrindra sy hizara ny asany.
Ny tanjona dia ny hianaran'ny Copilot ampy momba ny kaodim-kaody hahafahana manenjika samirery. Azonao atao ny mandray ny kaody tsy feno amin'ny mpiara-miasa amin'ny olombelona ary mamita ny asa amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo ampahany tsy hita. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia toa mahomby amin'ny fanaovana an'io. GitHub dia mikasa ny hivarotra ny fidirana amin'ilay fitaovana amin'ireo mpamorona.
Toy ny ankamaroan'ny fitaovam-pitsikilovana artifisialy, GitHub dia maniry ihany koa Copilot hihoatra ny fotoana arakaraka ny angona angoniny an'ny mpampiasa.
Rehefa manaiky na mitsipaka ny soso-kevitr'i Copilot ny mpampiasa, ny maodelin'ny fianarany amin'ny milina dia hampiasa an'io fanehoan-kevitra io hanatsarana ny sosokevitra ho avy, amin'izay dia ho lasa olombelona kokoa ilay fitaovana rehefa mianatra.
Fotoana fohy taorian'ny nanombohan'ny Copilot, nanomboka natahotra ny mpamorona sasany tamin'ny fampiasana kaody ampahibemaso hampiofana ny faharanitan-tsaina solon'ilay fitaovana. Ny ahiahy iray dia ny Raha mamerina sombin-kaody efa misy ny Copilot dia mety ho fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona na manasa ny kaody loharano misokatra ho an'ny fampiasana ara-barotra raha tsy manana fahazoan-dàlana mety.
Momba izany Ny Free Software Foundation dia nanambara fa nanangana antso izy novatsiana vola hangataka tatitra ara-teknika momba ny fiantraikan'ny Copilot ho an'ny vondron'olona rindrambaiko malalaka
“Efa fantatray fa Copilot toa tsy azo ekena sy tsy ara-drariny, raha ny fijerinay azy. Mila mihazakazaka rindrambaiko tsy andoavam-bola (Visual Studio na ampahany amin'ny Visual Studio Code) ary Copilot dia serivisy ho solon'ny rindrambaiko.
Ny antony dia mitaky rindrambaiko tsy maimaimpoana i Copilot, amin'ny maha Visual Studio IDE an'i Microsoft na mpanonta ny Visual Studio Code, dia mitazona ny FSF, ary mandrafitra ny "serivisy ho solon'ny rindrambaiko," izay midika fa fomba iray ahazoana fahefana amin'ny computing hafa.
Hatramin'izay Copilot dia fanitarana Visual Studio Code izay mampiasa ny fianarana milina voaofana amin'ny lozisialy malalaka misokatra manana fahazoan-dàlana hanolotra soso-kaody na endri-javatra ho an'ny mpamorona rehefa manoratra rindrambaiko izy ireo.
Na izany aza, Copilot dia nametraka fanontaniana maro hafa izay mila fandinihana bebe kokoa.
“Nahazo fanontanina maro momba ny toerana misy anay amin'ireo olana ireo ny Free Software Foundation. Azontsika atao ny mahita fa ny fampiasan'i Copilot rindrambaiko open source dia misy fiantraikany betsaka amin'ny ampahany lehibe amin'ny vondron'olona rindrambaiko malalaka. Te hahafantatra ireo mpamorona raha tena azo heverina ho fampiasana ara-drariny ny fampiofanana tambajotra neural ao amin'ny rindrambaik'izy ireo. Ny sasany izay mety liana amin'ny fampiasana Copilot dia manontany tena raha toa ka mety hiteraka fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ny sombin-kaody sy ny fitaovana hafa nalaina tahaka avy amin'ny toeram-pivarotana nampiantranoin'i GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nilaza ny FSF fa "tsy azo ekena sy tsy ara-drariny" ary hamatsy vola ny lahatsoratra momba ny olana ara-dalàna sy ny olana
Orbiter Space Flight Simulator dia loharano misokatra izao
Gixy, Pandora, Pire, Porto ary Rep: Yandex Open Source - Fizarana 2